‘नेपालको सहकारी क्षेत्रमा अवैध धन छैन’
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले नेपाली सहकारी क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको कालो (अवैध) धन नभएको बताएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) को आयोजनामा आज भएको ‘सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण’ विषयको अन्तरक्र्रियामा उनले कालो धन खुट्टामा जञ्जीर लगाएजस्तै हुने …
बैंकिङ खबर । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा सरकारले कडाई गर्दै आएको छ । सहकारी संस्थाहरुमा ठगी बढेको तथा दर्ता मात्रै गराएर कारोबार नगरेको पाइएपछि सरकारले यस विषयमा ठोस कदम चाल्न थालेको छ । विगत केही समयमा नै सहकारी क्षेत्रमा थुप्रै …
सहकारी सङ्घसंस्था तथा बैङ्कका सदस्यको सम्पूर्ण जानकारीसहितको लगत राख्न सरकारले निर्देशन दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन तथा नियमावलीले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सदस्यको कम्तीमा वर्षमा एकपटक, मध्यम जोखिममा रहेका सदस्यको कम्तीमा दुई वर्षमा एकपटक र न्यून जोखिममा रहेका सदस्यको कम्तीमा तीन …
मुनाल सहकारी दशौं वर्षमा
कास्की जिल्लाभरि कार्यक्षेत्र रहेको पोखराको मुनाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. बुधबारबाट स्थापनाको नवौं वर्ष पूरा गरी दशौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । दशौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सहकारीले आफ्ना सेयर सदस्यहरूलाई लक्षित गरि कार्यालय परिसरमा निःशुल्क मधुमेह परीक्षण शिविरको आयोजना …
भातृत्व विकास सहकारीले १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने
बैंकिङ खबर । भातृत्व विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने गर्ने भएको छ । संस्थाको पौष २९ गते सम्पन्न आठौँ वार्षिक साधारणसभाले आफ्ना सेयर सदस्यहरुलाई १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । …
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी संस्थालाई सक्षम र उत्तरदायी बनाउन सकहारीसम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । सीमित सहकारीका गल्तीका कारण सिंगो सहकारी क्षेत्र बदनाम भएको र त्यसको शुद्धीकरण गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ …
बैंकिङ खबर / सह–कार्य अर्थात सहकारीताले आपसमा मिलेर काम गरौं भन्ने भावना जगाउँछ । ’एकका लागि सबै र सबैका लागि एक’ भन्ने सिद्धान्तबाट प्रेरित भइ व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र राष्ट्रको आर्थिक हित तथा सामाजिक समून्नतिको लागि गरिने एकतबाद्ध प्रयास नै …
पाल्पा । ५० पैसा लगानीबाट स्थापना गरिएको रामपुर नगरपालिकास्थित अन्धकारमुक्ति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षमा एक करोड ६० लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । वि.स. २०५५ मा २८ जना युवाले प्रतिव्यक्ति ५० पैसा दैनिक संकलन गरी स्थापना …
शार्वरी सहकारीले माग्यो दुई दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी
बैंकिङ खबर । काठमाडौँको न्यूरोडमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको शार्वरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले दुई दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी माग गरेको छ । संस्थाले केही संख्यामा मार्केटिङ अफिस र २० जना बजार उत्प्रेरक माग गरेको छ । मार्केटिङ अफिसरका लागि …
बैंकिङ खबर । मेगा ड्रिम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षमा तीन करोड ६१ लाख आठ हजार नौ सय ५० रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । संस्थाको सातौं वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा गत आर्थिक वर्षमा कोष कट्टी अघिको उक्त …